Sideen ku Aasay Digg (Khaladkaygu) | Martech Zone
Sideen Ugu Aasay Digg (Khaladkayga)
Axad, Maarso 4, 2007 Axad, Maarso 4, 2007 Douglas Karr
Kuwa idinka mid ah ee akhristayaasha joogtada ah u ahaa qoraalkayga, waad og tihiin inaan tijaabiyo… wax badan! Waxaa laga yaabaa in aad u badan! Bilowgii toddobaadkan Waxaan iska diiwaangeliyey Gudbiyaha Isticmaalaha. Waa adeeg lagu aqoonsaday Maqaalkii ugu dambeeyay ee Fiirey halka qoraaga maqaalka uu ku bixiyay inuu helo Diggs on Digg.com.
Waa tan sida ay u shaqeyso… qof ayaa siiya isticmaale Soo-gudbiyaha waxayna ku kala qaybsadeen lacagta dadka isticmaala Digg, kuwaas oo, iyaguna, qod sheekada. Nidaamku runtii waa mid cakiran inuu runta kuu sheego. Waxaad heleysaa URL quudin rasmi ah oo kuu sheegaysa wixii sheekooyin ah ee loo yaqaan 'Digg'. Adiga markaa qod sheekada. Markaa waa inaad dib ugu noqotaa Isticmaalaha Soo-gudbiyaha si aad u soo sheegto adiga dugg sheekada. Intaa ka dib, adiga qod waa 'la xaqiijiyay'. Ma garanayo waxa ka kooban yahay, laakiin xaqiiqdii otomaatig ma ahan.
Waxaan u maleynayaa in hawl wadeenada Soo Gudbiye Isticmaalaha ay tahay inay aad uga taxaddaraan sida ay ganacsigooda ugu socdaan. Hadday had iyo goor wax ka qorayaan Digg waxa ku jira, waan hubaa in Digg iyaga si deg deg ah ugu soo dhowaan lahaa iyaga. Haddii aad tahay isticmaale Gudbiye isticmaale, waxaan kuu caddeyn karaa inay adiga kaaga dhakhso badan yihiin!
Xirfadaydii aan kulahaa gudbiyaha isticmaalaha ayaa si rasmi ah udhamaaday maanta. Waxaan helay fariinta soo socota markii aan isku dayay inaan galo Digg.com:
Oo muxuu ahaa dakhligeyga weyn?
Waan ka xishoonayaa in aan qirto in aan sameeyay $ 0.50 weyn kahor intaanan si duug ah u aasin Digg Xaqiiqdii, waxba ma aanan sameynin maxaa yeelay malaha ma lihi wado aan ku soo ururiyo $ 0.50 oo ka timid Gudbiyaha Isticmaalaha.
Marka maxaan bartay? Digg miyaa lagu xadgudbi karaa? Hubaal, laakiin iyagu waa daawashada iyo hagaajinta awooda ay u leeyihiin inay ka hortagaan arrimahan. Daryeelaha Isticmaalaha ma daryeelaa? Waxaan u maleynayaa inay u maleynayaan inay qashin qubka bidix iyo midig ed u daadinayaan a oo ay la socdaan reexaan. Ka dib markaan tijaabiyay Isticmaalaha Isticmaalaha, taladaydu waxay noqon doontaa ka fogow. Waa xanuun dabada ka baxa, waqti lumis ah oo aan u qalmin dinaarrada aad kasbato ama aanad kasban.
Gaar ahaan hadaad jeceshahay Digg. Ma ihi taageere weyn, laakiin waan ka xumahay inaan helay bootka.
Waan ka xumahay Digg! Waan ka xumahay Kevin, Owen, Nicole, Brian, Steve, Amar, Dan, Daniel, Eli, Jay, John, Mike, Ron, Scott, iyo Timeless!
Marka waxaan idhaahdaa…
Mar 4, 2007 at 6: 39 PM
Waxaa laga yaabaa inaad dhabarkaaga laaluush ku yeelan karto nus dameerka aad sameysay ..
oh sugee si kasta oo aad uheli weyday .. nacalaalow .. hada taasi waa ku xanuunaysaa lol
Mar 4, 2007 at 7: 10 PM
Glad Waxaan ku faraxsanaan lahaa inaan bixiyo 50 senti sadaqada Digg jecel!